Addaan fageenya miseensota foormulaa gidduu murteessuf qaaqa kana fayyadami. Addaan fageenyi kan ifteessamu akka dhibbeentaa hamamta bu'uura Dhangii - Hamamta Bocquu jelatti ibsameetti ifteessama.
Addaan fageenya jijjiiramaa fi ogeejjii gidduu jiru hiika.
Addaan fageenya sararoota giddu jiru murteessa.
Addaan fageenya ruuttii fi raadikalii giddu jiru murteessa.
Addaan fageenya kasaale irrarfiif murteessu.
Addaan fageenya kasaale jalarfiif murteessu.
Addaan fageenya kabala entaa fi irrayyee gidduu murteessa.
Addaan fageenya kabala entaa fi waamsiisa giddu jiru murteessa.
Dheerina irra hafaa sarara entaa murteessa.
Hulfina sarara entaa murteessa.
Addaan fageenya mallattoo idaati fi timijii olaana giddu jiru murteessa.
Addaan fageenya mallattoo idaati fi timijii gadaana giddu jiru murteessa.
Fageenya sarjaa qaree olaana qabiyyee fi dhuma sadallaa olaana gidduu jiru murteessa.
Fageenya surdalaa qabiyyee fi dhuma sadallaa olaana gidduu jiru murteessa.
Dhibbeenta hamamta irra hafaa mijeessi. Dhibbeenta 0 tti sadallaan yaada waliigalaatti hojja walqixa ta'etti qindeefamutti mijeefamu. Hamma gatiin galchamu dabalaa deeme, addaan fageenyi sarjaa qabiyyee sadallaa fi daanga sadallaa gara alaa gidduu jiruu guddacha adeema. Dirreen kun Sadallaa hunda safara waliin walitti maku qofaan fayyadamu dandeessa.
Addaan fageenya miseensota tarreenta tarree keessa murteesssa.
Addaan fageenya miseensa tarreenta tarjaa keessa murteessa.
Hojjaa mallattoole sarjala waliin walitti dhufeenya qaban ibsa.
Addaan fageenya gadee mallattoole fi jijjiiramaa giddu murteessa.
Hojjaa jijjirama irra hamma qarree olaana ogeejjiitti murteessa.
Fageenya surdalaa ogeejjii fi jijjirama giddu jiru murteessa.
Handaarri bitaa foormulaa fi madda keessoo giddu qubatu.
Handaarri mirgaa foormulaa fi madda keessoo giddu qubatu.
Handaarri gubbaa foormulaa fi madda keessoo giddu qubatu.
Handaarri jala foormulaa fi madda keessoo giddu qubatu.